Dowlada Itoobiya oo Codsi Farxad galinaya Dowlada Eritrea u dirtay Qaramada Midoobay – WidhWidh Online
Dowlada Itoobiya oo Codsi Farxad galinaya Dowlada Eritrea u dirtay Qaramada Midoobay
Dowlada Itoobiya ayaa codsi rasmi ah ay u dirtay Qaramada Midoobay waxa ay kaga codsatay in Cunqabateynta mudada sanadaha ah saaran laga qaado Dowlada Eritrea.
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa booqasho taariikhi ah ku tagay magaalada Asmara ee dalka Eritrea , waxa uuna heshiisyo dhoor ah la galay Madaxweyne dalkaasi Eritrea.
Abiy Ahmed ayaa la sheegay markii uu ka laabtay dalka Eritrea in magaalada Adis Ababa kula kulmay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres , waxa uuna hor dhigay codsi ah in Cunaqabateynta laga qaado dowlada Eritrea.
Codsiga dowlada Itoobiya hor dhigtay Qaramada Midoobay ayaa ah mid u baahan in golaha ay ka doodaan, waxa ayna u badan tahay in Golaha Ammaanku uu taageeri doono codsiga Itoobiya maadaama ay ka tahay xubin aan joogta aheyn.
Dowlada Eritrea ayaa cunaqabteyn adag la saaray sanadkii 2009-kii kadib markii dowlado ay ku jirto Itoobiya ku eedeeyeen dowladaasi in ay taageereyso Ururo argagaxiso oo qatar ku ah bariga Afrika.
Booqashadii uu maalintii Axada ku tagay dalka Eritrrea Ra’isul Wasaaraha Itoobiya ayaa albaabada u firtay albaabo badan oo ka xirnaa dalka Eretrea, waxaa sidoo kale la filayaa in Eretrea dib ugu soo laabato Ururka Goboleedka IGAD ay horey uga baxday.
Maamulka deegaanka Lamu ee Kenya oo soo jeediyay in Al-shabaab dagaal looga saaro keynta Booni
Duulimaadyadii Itoobiya Iyo Eritrea Oo Maanta Dib U Billaabanaya (DAAWO VIDEO)